Waa Kuwan Labada Tababare Ee Ay Man City U Dooratay Inay Midkood Bedel Uga Dhigto Pep Guardiola – Laacibnet.net
Waa Kuwan Labada Tababare Ee Ay Man City U Dooratay Inay Midkood Bedel Uga Dhigto Pep Guardiola
Kooxda ree England ee Manchester City ayaa la xusayaa inay dooratay labada macalin ee ay midkood doonaysa inay bedel uga dhigato tababaraheeda haatan ee Pep Guardiola oo xilli ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah qaab adag ku bilawday.
Labada macalin ee ay City dooratay ayaa lagu tilmaamay inay yihiin Julian Nagelsmann oo RB Leipzig hoggaan u ah iyo Mauricio Pochettino oo shaqo la’aan ah tan iyo markii Tottenham laga caydhiyay November 2019.
The Daily Mail oo ah wargeyska xogtan laga helayo ayaa sheegaya in Nagelsmann iyo Pochettino ay yihiin kuwa ay doonayso Man City sababtoo ah inaysan hubin xaalada heshiis kordhinta ee Pep Guardiola.
Warbixinta ayaa intaas ku daraysa in Sky Blues ay rajaynayaan in Guardiola oo ku jira sanadkii ugu dambeeyay heshiiska uu Etihad Stadium ku joogo uu qandaraas kordhin samayn doono balse aan isku wada halayn karin.
Macalinka ree Spain ayaa xilli ciyaareedkiisii shanaad ku qaadanaya Premier League iyo Man City waana in ka badan wakhtiyadii uu kusoo qaatay Barcelona iyo Bayern Munich oo uu hore usoo layliyay.
Madaxa hawlgalka Manchester City ee Omar Berrada ayaa bishii hore sheegay inay ka go’antahay inuu waxkasta samayn doono si uu Pep ugu sii hayo kooxda.
Pochettino ayaa ahaa tababare mudo dheer lala xidhiidhinayay inuu noqonayo bedelka Pep Guardiola oo 49 sano jir ah haddii uu go’aansado inuusan heshiis kordhin samayn.
Dhinaca kale Nagelsmann ayaa awoodiisa tababare heer kale geeyay kaddib markii uu Leipzig wareega afar dhammaadka ee Champions League gaadhsiiyay xilli ciyaareedkii hore.
Nagelsmann iyo kooxdiisa ayaan wali xilli ciyaareedkan laga adkaanin horyaalka Bundesliga waxaana uu Arbacada soo gaadhi doonaa magaalada Manchester oo ay Man United kulan Champions League ah kula ballansan yihiin.